Qaybaha caaga ah - Mestech Industrial Limited
Qaybaha caaga ahwaxaa si ballaaran loogu adeegsadaa elektarooniga, qalabka korontada, daweynta, qalabka guryaha, gawaarida, duulista, warshadaha, qalabka iyo warshadaha kale. Cusbi caaga ah waa lagu kululayn karaa godka caaryada si loo helo qaabab iyo cabbiro kala duwan oo qaybo balaastig ah iyo alaabooyin ah Waxay kuxirantahay horumarka tikniyoolajiyadda casriga ah, noocyo badan oo balaastik ah ayaa lagu soo saaraa si ballaaran.
Mestech waxay ku hawlanayd naqshadeynta qaybaha balaastigga ah, soo saarista wasakhahaasi oo la isku duro iyo cirbadeynta qaybaha iyo wax soo saarka, iyo sidoo kale geedi socodka daaweynta ka dib sida rinjiyeynta buufinta, daabacaadda shaashadda xariirta iyo korantada. Alaabtayada caagga ah ee macaamiisha waa sida soo socota:
Guryaha caaga ah ee korantada
Double qaybo wax taaj oo kale duray
Waxyaabaha caagga ah ee hufan
Falanqaynta boostada ee qaybaha balaastigga ah
Guddi caag ah oo leh daabacaadda shaashadda nano ee 3D
Qalabka elektarooniga ah ee xafiiska
Waxyaalaha balaastigga ah ee loo yaqaan 'nylon'
Shaag caag ah
Wax taaj oo kale birta
Guri aan biyuhu lahayn
Astaamaha alaabada caagga ah:
1 miisaan khafiif ah Waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo qaybo iyo alaabooyin miisaanka culus.
2 Xasiloonida kiimikada ee aadka u fiican iyo iska caabbinta daxalka Inta badan caagagga waxay leeyihiin iska caabin daxal wanaagsan oo aysiidh, alkali iyo kiimikooyin kale leh
3 dahaadhka korantada ee aadka u fiican, balaastikada guud waa kuwa haga korantada oo liidata, iyo iska caabbinta dusha sare iyo iska caabbinta mugga ayaa aad u ballaaran. Sidaa darteed, balaastigga ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha elektarooniga ah iyo farsamada. Sida fiilada xakamaynta dahaarka caaga ah.
4 Nadiifinta kuleylka wanaagsan Isugeynta kuleylka ee balaastigga ayaa yara hooseeya, una dhiganta 1 / 75-1 / 225 oo bir ah,
5 nooc farsamo oo ballaaran. Waxay leedahay xoog gaar ah oo sare Waxyaabaha farsamooyinka ah ee balaastikada, sida adkaanta, xoogga silica, dheereynta iyo xoogga saameynta, ayaa si ballaaran loo qaybiyaa. Sababta oo ah culeyskeeda gaarka ah ee yar iyo awoodda sare, balaastikadu waxay leeyihiin xoog gaar ah oo gaar ah.
6 Waxay leedahay saameyn iska caabin ah oo wanaagsan, tirtirka dhawaaqa iyo nuugista shoogga.
7 Iska caabbinta dharka wanaagsan iyo daahfurnaanta
8 Baaxadda wanaagsan: way fududahay in la qaabeeyo qaabab iyo cabbirro kala duwan oo qaybaha wax soo saarka ah iyada oo la adeegsanayo kuleylinta caaryada, si loo ogaado wax soo saar ballaaran oo wax ku ool ah.
Mestech waa soo saare xirfadle ah oo caaryada la isku duro iyo qaybo caag ah. Waxaan ku siin karnaa macaamiisha wax soo saarka iyo adeegyada kala duwan ee balaastigga ah, waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyno.Fadlan nala soo xiriir haddii loo baahdo.